lundi, 17 avril 2017 23:01
Fianarantsoa : Nilamina ny Alatsinain'ny Paka
Maro ny toerana mahazatra falehan'ny mponin'i Fianarantsoa rehefa vaninandro tahaka izao, toa ny eny amin'ny point de vue, eny Anosy, eny Manovoriaka, amin'ireny hetsika maro isan-karazany ireny. Fa ny isan'ny fihetsika tsy miova dia ny fankanesana ao amin'ny toerana fandraisambahiny lehibe misy fialamboly iray eto an-tanàna.
Ankoatra ny lalao sy lomano atao ao an-toerana dia mitombo izay tsy izy ny mpaka sary ao amin'io toerana io na dia maro aza ny mipika sary amin'ny finday. Filaharana mihoatra ny mahazatra ny teo amin'ny LaboMen.
Misy amin'ireo fianakaviana no nisafidy ny hijanona an-trano. Nilamina ny fety amin'ny ankapobeny.
lundi, 17 avril 2017 22:59
Fetin'ny Paska : Tomefy mpitsangatsangana ny torapasik'i Mahajanga
Hatramin'ny omaly andro Paska, efa an'arivony ny mpitsangatsangana nihazo ny Grand Pavois sy ny Petite Plage hitsangatsangana.
Androany alatsinainin'ny Paska kosa dia saika nirohotra namonjy moron-dranomasina avokoa ny mponin'i Mahajanga sy ireo vahiny mpialasasatra.
Ny eny amin'ny Petite Plage Amborovy no tena mahazatra ny maro ary safidy voalohan'ireo mpitsangatsangana noho izy tongan'ny bus izay takatry ny rehetra ny sarany. Tsy vitsy kosa anefa no te hiala amin'ny hamaroan'ny olona ka nisafidy ny tany amin'ny Grand Pavois na Antsanitia na ihany koa Zahamotel.
Ny fitaterana no tena nanahirana sy nampitaraina ny maro. Tsy maharaka ny hamaroan'ny olona mivezivezy ny fiara fitateram-bahoaka na dia efa misy aza ny fanampiana ataon'ny kaoperativa hafa an'ireo zotra miasa mampitohy ireo toerana misy torapasika.
lundi, 17 avril 2017 22:30
Alatsinain'ny Paska: Nilamina
Nilamina ihany tamin'ny ankapobeny na dia teo ihany aza ny tsy fahan-driampahalemana sy ny adiady.
Raha ny teny amin'ny kianja annexe Mahamasina dia vory olona tokoa, izay nafanain-dry Daddy Love, Krutambul, Princia, Sarobidy sy Christian K, Tence Mena, ary ry Black Nadia sy ny ekipany.
lundi, 17 avril 2017 20:06
Week-end pascal HJRA: 7 morts, situation lundi à 15h
Les Urgences de l'hôpital HJRA ont été saturés depuis hier, surtout ce lundi des Pâques.
On recense 7 morts, bilan provisoire de 15h.
lundi, 17 avril 2017 20:05
By-passe: Miandahy miambavy ireo mamo
Betsaka noho ny isan-taona ny mpitsangatsangana teny amin'ny By-passe Antananarivo androany.
Niavaka tamin'ity raha betsaka ireo mamo, ka miandahy miambavy mihitsy izy ireo izay nobataina fotsiny fa tsy mahatsiaro tena intsony.
lundi, 17 avril 2017 18:19
Antsanitia-Mahajanga : Nihena ny isan’ny mpitsangatsangana tonga
Nihena tsy toy ny isan-taona ny isan'ireo mpitsangatsangana tonga ety amin'ny torapasika Antsanitia tamin'ity fialan-tsasatry ny Paska 2017 ity.
Ny haratsian-dalana no tena antony iray mahavitsy ny mpitsidika ity toeram-pitsangatsangana isany mampalaza an’i Mahajanga ity. Vao miala eo Amborovy dia efa ratsy ny lalana ary sarotra ho an'ny fiara iva, manampy trotraka koa ny fasika izay mampilentika ny fiara ankoatra ireo fiara tsy mataho-dalana.
lundi, 17 avril 2017 15:27
RN4-Ambohidratrimo : Mort prématurément d’un jeune scootériste
Il a perdu le contrôle de sa moto hier dimanche des Pâques, et s’est renversé au moment de passage d’un taxi-brousse. Le drame était inévitable !